Mandeha araka ny tokony ho izy ny ady amin’ny tsimatimanota hoy ny SMM – Inona no vaovao 16 fevrier 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Lutte contre la corruption à MadagascarMandeha araka ny tokony ho izy ny ady amin'ny...
Lutte contre la corruption à MadagascarNEXTHOPERANARISON TsilavoRANDRIANASOLO JacquesSEM Andry RAJOELINA
Mandeha araka ny tokony ho izy ny ady amin’ny tsimatimanota hoy ny SMM – Inona no vaovao 16 fevrier 2019
Niaiky ny Mpitsara Clémént Jone, omaly manoloana ny fampiharana ny lalàna eto Madagasikara fa “amin’izao fotoana vao mandeha arak any tokony ho izy ny fampiharana izany”. Isan’ny antony nahatonga ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara nampiaka-peo mafy ny fisian’ireo sarangan’olona sasantsasany niseho ambonin’ny lalàna. Tao antin’ny fitondrana nifandimby teo aloha, nisongadina ny fisina’ny Tsimatimanota. Iray volana monja nandraisan’ny Filoha Andry Rajoelina ny fahefana, nisy fandraisana andraikitra lehibe ka tomponandraikitra ambony maro no nidoboka am-ponja. Ireto farany izay voakajy teo anatin’ny antsoina hoe « trondro vaventy ». « Teo aloha dia natao ho an’ny Sarambabem-bahoaka fotsiny ny lalàna fa tsy natao ho an’ny mpitondra fanjakana », hoy izy nanohy. Notsindiany fa “izahay tao amin’ny Smm dia efa nilaza foana fa maro eny endriky ny tsy fitovian’ny fampiharan-dalàna. Saingy efa manomboka kosa izy ankehitriny”. Nomarihiny fa tys mahagaga loatra raha nisy mpitondra teo aloha ka rehefa niala tamin’ny fahefany izy vao enjehina. “Efa fahita eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny tahaka izany? Isan’izany ohatra ny Filoha Frantsay teo aloha, Nicolas Sarkozy, izay ea niala tamin’ny toerana maha Filoha azy izy vao nandeha ny fanadihadiana mahakasika ny famatsiam-bola nampiasainy nandritry ny fampielezan-keviny”, arak any fanazavana hatrany.
Nodisoan’ity Mpitsara ity koa ny feo mandeha fa valifaty politika no antony nampidirina am-ponja ireo olobe nidoboka am-ponja tao ho ao. Tokony havahina tsara hoy izy ny mpanao politika manao fandikan-dalàna? Sy ny mpanao politika manao fandikan-dalàna politika. Voizin’ny sasany hatrany eto amintsika fa fanaovana valifaty politika rehefa “olomalaza na lehibe no ampiharana ny lalàna”. Zaza-baobao ho antsika eto Madagasikara ny maheno “tomponandraikitra ambony na olo-malaza voasambotra. Fampiharana ny lalàna tena izy anefa izany ka ny irariana dia enga anie mba hitohy”, arak any voalaza hatrany. Heverin’ity mpitsara ity fa antoka irey lehibe hanafoana ny fandrobana ny harem-pirenena ny fampiharana ny lalàna amin’ny olona rehetra. Amin’izao fotoana izao vao mahita ireo vahoaka fa “mitovy ny rehetra eo anatrehan’ny lalàna”. Niaky tamim-pahatsorana izy fa mahafo ny ady amin’ny tsimatimanota ataon’ny Fitondrana Andy Rajoelina. Omaly moa no niatrika ny fifidianana izay ho Filoha vaovao hitarika ny Sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara ireo mpitsara mivondrona ao antin’ny SMM. Nanomboka tamin’ny sivy maraina ny fisokafan’ny toerana nandatsaham-bato. Hatramin’ny ora nanoratanay dia tsy mbola nivoaka ny voka-pifidianana.
Previous articleLes mesures privatives de liberté individuelle à Madagascar par RANESA Firiana
Next articleMadagascar – arrestations spectaculairement louches des revanchards – La gazette de la grande île du 16 février 2019